गुल्मीका यि युवा जो प्रेसर कुकरमा गुल्मीको कफी बनाई बेच्छन्, कमाउँछन् महिनाकै ५ लाख रुपैँया सम्म - Gulminews
गुल्मीका यि युवा जो प्रेसर कुकरमा गुल्मीको कफी बनाई बेच्छन्, कमाउँछन् महिनाकै ५ लाख रुपैँया सम्म
२०७५ फाल्गुन २५, ०३:५१
प्रेसर कुकर कफी । सुन्दै अचम्म । कफी नपिउने आजकल को होला र? तर प्रेसर कुकरमा पकाएको कफी पिउने हामी कती छौँ होला ? हामी मात्रै हैन संसारमै एकदम कम होलान् । प्रेसर कुकर कफी त्यो पनि हाम्रै गुल्मीको । नेपालमा कफी भित्राउने नै गुल्मेली । गुल्मी अर्गानिक कफीको चर्चा धेरै सुन्दा सुन्दै पनि आफ्नै गाउँठाउँमा फलाईएको कफी नचाख्ने तपाईं हामी गुल्मीकै धेरै जना छौ, अझ अरुको त के कुरा गर्नु ?
तर एकजना गुल्मेली गुल्मीकै कफी प्रेसर कुकरमा बनाएर लाखौंँ आम्दानी गरिरहेका छन् । प्रेसर कुकरमा कफी बनाएरै महिनामा ५ लाख सम्म कमाउने गुल्मीका युवा हुन् बिष्णु पाण्डे । बिष्णुले विदेश काम गर्न जाँदा पहिलो पटक कुकरबाट कफी बनाएको देखेका थिए।
उनले देखेको त्यही कुरा नेपालमा पनि लागू गर्न खोजे। बजारमा पाइने सामान्य प्रेसर कुकरलाई आफूले चाहेजस्तो गरी मोडिफाई गरीदिन उनले एक जना इन्जिनियरलाई भने। पाँच वर्षअघि बुटवलमा कुकर कफी सुरू गरे।
बिष्णुले बुटवलमा सुरू गरेको कुकर कफीलाई उनका दुई भाइले काठमाडौं ल्याइपुर्‍याएका छन् । सिनामंगलमा रहेको पाण्डे तन्दुरी एण्ड खाना घर जुन खाना घर भन्दा पनि धेरै कुकर कफी पसलको रुपमा चिनिन्छ आजकल । बोर्डमा लेखिएको छ, ‘पिउँ हजुर, गुल्मीको मीठो कुकर कफी।’
बुटवलमा बिष्णुको कुकर कफीले नाम र दाम कमाउन थालेपछि भाइहरू यादव र प्रकाशलाई पनि काठमाडौंको सिनामंगलको आफ्नो होटलमा कुकर कफी सुरू गरे । कुकर कफी देखेर सुरूसुरूमा ग्राहकहरू त अचम्म परे । ‘कफी खान खोज्नेहरू पनि महंगो पो होला कि भनेर हिच्किचाउनुभयो,’ यादवप्रसादले भने, ‘पछि कुकर कफी, कपको ५० रूपैयाँमात्र लेखेर टाँसेपछि ग्राहक बढ्न थाले।’ पकाउने तरिका नयाँ र स्वाद पनि मिठो भएपछि कुकर कफी खानेको भीड बढ्दै गयो।
‘चियो याममा सय कप बिक्री हुन्छ,’ प्रकाशले भने, ‘अझ कतै पार्टीहरू परेको बेलामा ४ सयदेखि ५ सय कप पुग्छ।’
ग्राहकहरू कफी अर्डर गर्छन र कफी पकाएको हेरेर पनि बस्छन् ।
हेरौँ युट्युब च्यानल सिधा कुराले गरेको यो कुराकानी:
लन्डन, डिसेम्बर २० । बेलायतका सुपरिचित व्यवसायी तथा पूर्व पर्यटन दूत पशुपति भण्डारी ‘कम्युनिटी हिरो
हेल्सिन्की, डेसेम्बर १९ । गुल्मीमा जन्मेर बेलायतमा कर्मभुमी बनाईरहेका एकजनाले स्कटल्याण्डको पर्थ सिटी सेन्टरमा रहेको
सन्जु काउछाअसौज ३ । गुल्मीमा युटुब पत्रकारितामा सकृय एक संचारकर्मी राष्ट्रिय मानपदवीबाट विभुषित हुने भएका
छत्र शंकरसिड्नी, बैशाख ११ । काशीरामको पालामा गुल्मी बागलुङतिरका मानिसहरु काठमाडौं भन्दा पनि रोजगारीको खोजीमा